Talooyin ku socda Madaxweynaha DFS! | KEYDMEDIA ONLINE
Waxa ay ku eedeeyeen Xubnihii shiray in Madaxweynuhu uu ku guuldareystay wax ka qabashada dhibaatada ka jirta Dalka haday ahaan lahayd Amni ama Maamul.
Eedaha loo soo jeediyey Madaxweynaha, ayaa isuga jira kuwa macquul ah iyo kuwa aan macquul ahayn, tusaale ahaan macquul ma'ahan in Madaxweynaha lagu eedeeyo dib u dhacyada ku yimaada Xukuumadda ama qeybaha kale ee Dowladda, sida Garsoorka oo kale waayo Madaxweynuhu waa Astaanta Qaranka (The head of State) Marka Caqli ma'ahan in lagu yiraahdo Madaxweynaha iscasil Amnigiibaa faraha ka baxaye.
Yaan La Isku Furin Albaab Fowdeed...
Markaan kaashado aqoontayda, waxaan u arkaa baaqii ka soo baxay qaar ka mid ah Xildhibaanada in uu yahay mid Sharci daro ah, islamarkaana gef ku ah nidaamka dowladnimo, Waayo waxaa la isku dhex-qasay arimo aan shaqo isku lahayn, Tusaale ahaan marka laga hadlayo Amni, Siyaasad iyo Dhismo maamul waxaa Shaqo ku leh Xukuumadda, Waana sababta loo dhisay Wasaaradaha sida Arimaha Gudaha, Arimaha Dibadda iyo Arimaha Amniga. Hadii inkays gaabis ku yimaado xagga Amniga waa in lala xisaabtamaa Wasiirka Amniga,Waa markaan ka hadlayno nidaam dowladnimo amma haddii Ragga qaar ay busaaradeystaan taasi waa arin kale.
Markaan hadalka soo uruuriyo, Madaxweynuhu ma'ahan Wasiir ama Talyo ciidan, Madaxweynuhu waa Astaanta Qaranka (The Head of State) waa Shaqsiga la rabo in uu la socda sida ay u shaqeeyaan qeybaha ay ka kooban tahay Dowladda sida Sharci dajinta, Garsoor iyo Fulinta, Amma wixii ka soo haray intaas waa fowdo iyo qas, Waana sababta aan u Qoray Maqaalkii aan kula talinaayey Xubnihii xildhibaanada ahaa ee ku baaqay in uu Madaxweynuhu is casilo.
Arinta kale ee muhiimka ah ee u baahan in la xuso waxaa weeye, In Dastuurkuu uu siiyey Raysul Wasaaraha iyo Golahiisa Wasiirada awoodo badan oo ay wax ku qabtaan, waana meesh ay dhaliishu ka jirto una baahan in la canaanto waa haddii la doonayo in wax la soxo si dhibka looga baxo. Ugu danbey Madaxweynuhu waa Aabaha Qaranka Shaqadiisuna waa la socosho iyo hubin, wixi intaas dhaafsiisan waxaan u dhaafeyna Ragga Sharci yaqaanada ah sida Abuukaate Dhagey iyo Ragga la mid ah.
Laakiin dhinaca kale wey jiraan dhaliilo badan oo ay leedahay Dowladda Federaalka xitta Baarlamaanka, waayo lama qaban Shaqooyin badan oo loo baahnaa in mar hore la qabto tusaale ahaan, waxa ay ahayd in dib u eegis lagu sameeyo Dastuur "Baaska Mahiga", kaas oo aan kala cadeyneynin awoodaha Madaxweynaha iyo Raysul Wasaaraha. Waxaa kaloo loo baahnaa in mar hore la sameeyo Sharcigii hagaayey Federaalismka.
Amma dhaliilsha kaliya ee uu Madaxweynuhu leeyahay waxaa weeye in uusan magacaabin wali Shaqsi ku haboon Jagada Raysul Wasaaraha, kaas oo aqoon iyo kartiba u leh wax ka qabashada dhibaatada ka jirta Dalka, hadday ahaan lahayd sugidda Amniga iyo dib u soo nooleynta Hay'adihii Dowladda ee burburay tusaale ahaan markii la doortay Madaxweynaha, waxa lagula taliyey in uu magacaabo Maxamed Cabdulaahi (Farmaajo). Waayo Farmaajo waxa uu muujiyey madadii yareyd ee uu Raysul Wasaarahu ahaa karti iyo hogaamin wanaagsan waana sababta ay u jecel yihiin Soomaali badan.
Ma xaqbaa in la dhaliilo Madaxweynaha?
Jawaabtu waa Haa, Waayo waxaa faraha ka baxay Amnigii, waxaa la maareyn waayey dhismaha Maamul Goboleeedyada, waxaa sidoo kale lumay doorkii hogaamineed ee Dowladda Federaalka, Waaba Adiga arkaya sida ay u dhaqmayaan Maamul Goboleedyada sida Somaliland, Puntland iyo Jubba, kuwaas oo qatar gelinaya Midnimada iyo Madax banaanida Dalka, waxaana tusaale kuugu filan hadalkii ka soo yeeray C/Wali Gaas oo ahaa Waxan Qunsuliyad ka furaneynaa Yemen. Markuu Qunsilayd furanayo ma dal madax banaanbaa? Aqooney Xaal qaado Dowladnimooy Xaal qaado!!
Inkastoo Madaxweyne lagu doortay dal ay dadkiisu burburiyeen Islamarkaana aysan heshiis ahayn. Inkastoo laguu doortay dal ay majaraha u hayaan cadow cad iyo mid madoow. Inkastoo laguu dhiibay Kursi ay dhiiqeeyeen Raggii Adiga kaa horeeyey sida Sheekh Shariif oo kale hadana waxaa la filaayey in ay wax badan is badali doonaan ka dib markii la doortay Adiga iyo Gudoomiye Jawaare laakiin ma dhicin sidii la filaayey, Waana sababta ay u niyad jabsan yihiin guud ahaan Shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan Siyaasiyiinta.
Maadaama ay caqabado badan jiraan, Hadana waxaa kaa muuqda jileec badan iyo aamusnaan tusaale ahaan waxaa la kala garan la'yahay in aad ku qanacsan tahay sida ay wax u socdaan iyo in ay jiraan culeyso badan oo ku haysta. Waxaa Iyadana lala yaaban yahay waxa aad uga aamusan tahay waxyaabaha ay sameynayaan Maamul Goboleedyada sida Puntland Somaliland iyo Jubba. Waxa ay ahayd in aad ka faa'iideysataan Sharciyadda aad haystaan iyo aqoonsigan Caalamiga ah.
Mudane Madaxweyne, maadaama hadda laguu digay, Waxaa lagaaga baahan yahay in aad fadhiga ka kacdo oo aad dhiiranaan la timaaddo Iskana dhiciso Dowladaha Dariska ah, islamarkaana aad gacan bir ah ku qabato Maamul Goboleedyada gaar ahaan kuwooda isu haysta in ay wax yihiin sida Somaliland oo kale Adigoo isticmaalayo dhammaan wixii awood ah oo aad haysataan.
Gaba gabadii, anigoo hubo in uu Qoraalkaan kusoo gaarayo, waxaan kuu soo jeedinayaa Madaxweyne talooyinkan soo socda, kuwaas oo aan is leeyahay wax badan bay ku tarayaan.
In aad sameysato la taliyaal Aqoon leh islamarkaana daacad ah, kuwaas oo kaala taliyo arimaha Amniga, Siyaasadda, Dhaqaalaha iyo Dib-u-heshiisiinta.
In aad xoogga isugu geyso arimaha dib-u-heshiisiinta, Sidoo kalena aad gacan ka geysato sidii loola hadli lahaa Xarakada Al-Shabab oo runtii muhiim u ah nabad ka dhalata Dalkan.
In aad la timaaddo siyaasad ka duwan tii hore marka aad la deal-gareyneyso Maamul Goboleedyada,Beesha Caalamka iyo Dowladaha Dariska ah.
In aad si dhab ah ula xisaabtanto Beesha Caalamka, Islamrkaana aad u sheegto waxa ay doonayaan Shacabka Soomaaliyeed ee ka daalay balanqaadyada beenta ah.
In aad dhegeysato talooyinka ka imaanayo Shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan Culimada,Xildhibaanada, Aqoonyahanada,Siyaasiyiinta,Dhaliyarada iyo Hooyooyinka.
In Dalka laga saaro dhamaan ciidamada ka socda Dowladaha Dariska ah sida Itoobiyaanka iyo Kenyaanka,Kuwaas oo qeyb ka ah fowdada iyo jahawareerka ka jira Dalka.
Cabdullahi Ibrahim - Keydmedia Online